Cadastral kukosha: zvazviri, zvinokanganisa zvinhu uye maitiro ekuti uzviwane sei | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 31/05/2021 20:10 | Yakagadziridzwa ku 31/05/2021 20:12 | nzvimbo yekugara
Iko kukosha kwecadastral ndeimwe yematemu atinoda zvakanyanya. Asi zvakare vatinovenga zvakanyanya. Izvi zvinodaro nekuti pane dzimwe nguva apo kukosha uku kunogona kutikonzera kuti tigamuchire mashoko akanaka; uye panguva imwechete yatinofanira kukwenya homwe dzedu kuti titarisane nemitero inotyiwa.
Asi, Chii chinonzi cadastral kukosha? Chii ichochi? Inoverengwa sei? Nhasi tiri kuzotaura newe zvakadzama nezve izwi iri raunofanira kuziva nemoyo.
1 Chii chinonzi cadastral kukosha
1.1 Cadastral kukosha uye kukosha kwekuongorora
2 Zviitiko zvinokanganisa kukosha kwecadastral
3 Maitiro ekuverenga iyo cadastral kukosha kweiyo real estate
3.1 Iine risiti yeBII
3.2 Iine cadastral referensi
4 Maitiro ekukumbira kukosha muCadastre
5 Chii icho?
Chii chinonzi cadastral kukosha
Iko kukosha kwekadastral ndeye kukosheswa uko kunopihwa kune real estate nenzira yekuti isimbiswe kuti chii kukosha kweichi. Semuenzaniso, ngatiti iwe une imba munzira iri "yakapfuma". Iyo cadastral kukosha kweiyo imba ichave yakakwira nenzvimbo, asi zvakare nezvekuti imba yacho sei.
Chaizvoizvo, ongororo yekuongorora yatove yakatemwa nekanzuru yega yega yeguta, nenzira yekuti haina kufanana mune rimwe guta senge mune rimwe, kunyangwe rakada kufanana.
Zvese izvi zvivakwa zvakamanikidzwa kunyoreswa muCadastre, inova iyo inounganidza kukosha kwezvivakwa zvese. Iyo yemahara uye yeruzhinji maitiro, saka unogona nyore kubvunza zvese kune chimwe chinhu chako uye nevamwe.
Cadastral kukosha uye kukosha kwekuongorora
Kune vazhinji avo, zvisirizvo, vanofunga kuti kukosha kwecadastral uye kukosha kwakayerwa kwakafanana, kana zvirizvo zvisiri. Kuongororwa ndiko kunoshandiswa pakukumbira mogeji, uye kukosha uku kunogona kuve kwakakwirira kana kudzikira kupfuura iyo cadastral.
Uyezve, ndiyo inoshandiswa kuisa mutengo wekutenga kana wekutengesa weizvozvo zvakanaka. Uye imwezve pfungwa yekufunga nezvayo, kukosha kwakayerwa kunochinja-chinja zvichienderana nemamiriro ezvinhu emusika, nenzira yekuti panguva ipi neipi inogona kuve yakakosha zvakanyanya kana kushoma.
Zviitiko zvinokanganisa kukosha kwecadastral
Kunyangwe isu tisingakwanise kukuudza zvese zvinokanganisa chimiro chekupedzisira, pane zvimwe zvinhu zvinotarisisa, kune chikuru kana zvishoma, kukosha kwecadastral yeimba. Izvi ndeizvi:
Nzvimbo kana nzvimbo. Ndokunge, iyo nzvimbo pane izvo zvakanaka zviripo uye nezvakarikomberedza.
Zvinhu zvinoshandiswa pakuvaka. Kwete izvozvo chete, asiwo nzira iyo yakavakwa, mutengo, kunaka, zera repfuma ...
Kukosha kwemusika. Ehe, iwo mutengo unogona kuwanikwa neicho chivakwa mumusika unokanganisawo neimwe nzira, kungave kutenga kana kutengesa. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo cadastral kukosha haizombopfuure kukosha kwemusika. Dambudziko nderekuti izvi zvinoreva kuti panofanirwa kuve nekudzokororwa kweiyo cadastral kukosha kuitira kuti zvienderane nezvatataura.
Maitiro ekuverenga iyo cadastral kukosha kweiyo real estate
Fungidzira kuti une zvivakwa, ingave imba, furati, nzvimbo ... Ungangoda kuziva kuti kukosha kwayo kwecadastral chii,
Kuti uverenge, Iwe unofanirwa kuwedzera zvese kukosha kwenzvimbo uye neyechivakwa. Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa zvimwe zvirevo zvakatemwa nezvisungo zvemadhorobha. Ndokusaka isu tisingakwanise kukuudza chaizvo fomu, asi zvakanakisa kuziva kuti zviyero zvipi zvekuyedza uye data rinotevera:
Nzvimbo yeiyo chivakwa.
Hunhu uye zera repfuma.
Nhoroondo, tsika, hunyanzvi kukosha.
Chero zvazvingaitika, haufanire kupenga uchikumbira idzi data, nekuti pane nzira mbiri dzekuziva kukosha kwecadastral pasina kuita kuverenga. Aya mafomu ndeaya:
Iine risiti yeBII
Sezvo iwe uchiziva, zvese zvivakwa zvinofanirwa kuziviswa muCadastre uye, pasi pecadastral kukosha, iwe unofanirwa kubhadhara mutero, handiti? Zvakanaka, mune iyo risiti yeBII, iyo inobhadharwa gore rega rega, iyo cadastral kukosha kwenzvimbo inoonekwa.
Kwete izvozvo chete, asi Iyo inoputsa, kune rumwe rutivi, kukosha kwenyika iyo iwe yawakavaka; uye, kune imwe, kukosha kwekuvaka.
Kana usina risiti paruoko, asi iwe uchirangarira kuti wakabhadhara zvakadii, unogona kuverenga zviri nyore. Ehe, iwe unofanirwa kuziva izvo mutero wakashandiswa kwauri (iwe unoona izvo muPfuma Rejista).
Iine cadastral referensi
Imwe nzira yekuwana iyo cadastral kukosha kweiyo real estate iri nekadastral referensi, ndokuti, ine kodhi-makumi maviri kodhi inoratidza chimwe nechimwe chinhu. Kana iwe unayo, kungave online kana nekudana iyo Cadastre, ivo vanogona kukupa iwe iyo nhamba yaunoda kuziva.
Maitiro ekukumbira kukosha muCadastre
Sezvatakambotaura, kukosha kwecadastral hakusi "kwakavanzika" kana chimiro chakavanzika. Zviri pachena uye, kunyangwe iwe uri muridzi weiyo yeruzhinji nhumbi, iwe unogona kuwana rumwe ruzivo.
Ehezve, hazvina kufanana kuti iwe uri mubati pane izvo zvausiri. Kana usiri iwe muridzi, iyo chete data yauchazokwanisa kuwana zvinotevera:
Shandisa kana kuenda.
Chikumbiro cheichi kukosha chinogona kuitwa online kana nefoni uye kune izvi iwe unofanirwa kubata iyo Cadastre, unova mutumbi unogadzirisa rese iri data.
Tisati takuudza kuti iyo cadastral kukosha kwakakosha pamitero. Uye ndezvekuti, zvichibva pane izvi iwe uchabhadhara zvakanyanya kana zvishoma. Chaizvo, mitero inokanganisa kukosha kwezvivakwa Ndizvo:
Yemunhu Mari Yemubhadharo (YeMunhu Inowanikwa Mutero).
IBI (Real Estate Mutero).
IP (Wealth Mutero).
Municipal capital kuwana (Mutero waMasipala pamutengo wenyika).
Nhaka uye mutero wechipo.
ITPAJD (Mutero wekuchinjisa kwemadzitateguru uye zvakanyorwa zvemutemo zviito).
Iko kukosha kwecadastral kuri kujekerwa kwauri ikozvino? Rangarira kuti, kana usina chokwadi, iyo Cadastre inogona kukubatsira iwe kuziva kuti nei yako real estate iine iyo kukosha kwete imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » nzvimbo yekugara » Cadastral kukosha